प्रेमिल गीतका कुशल शब्द–संयोजक « Tuwachung.com
मुकेश राई	२०७७ चैत्र १५, १६:०६
नीलम आङबुहाङ राई गीतिएल्बम सार्वजनिक गर्ने लाहुरे समुदायका पहिलो गीतकार हुन् । संवत् २०६२ मा सार्वजनिक ‘जुनी–जुनी’ गीतिएल्बमले गीतकार राईलाई स्थापित गरायो । इलामले जन्माएको लोभलाग्दो प्रतिभा उनी इलामजस्तै शान्त र सौम्य छिन् । उनका गीत सुन्नेलाई प्रेमिल र प्रिय लाग्छन् ।
नीलम भगवान्प्रति कति आस्था राख्छिन् ? थाहा छैन । तर, उनका गीत सुन्दा माया नै भगवान् र सर्वस्व हो भन्ने प्रस्टिन्छ । गीतमार्फत नारी उत्पीडन व्यक्त गर्न त्यत्तिकै सिपालु । नारी उत्पीडन भगवान् होइन, आफ्नै चेतना र बौद्धिक क्षमताले निप्टारा लगाउन सक्नुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ ।
बेलायतमा नारी गीतकार धेरै भए पनि निरन्तरता दिने कमै छन् । तर, उनले व्यस्त दिनचर्यासँगै सांगीतिक यात्रा लम्ब्याइरहेकी छन् । गीतिएल्बमसँगै म्युजिक भिडियोमार्फत श्रोता तथा दर्शकका मन जित्ने प्रयास जाँगरिलो बन्दै गएको छ ।
इलामको समालबुङमा बुवा खड्गबहादुर आङबुहाङ र आमा रुक्मिणीदेवी आङबुहाङको कोखबाट जन्मेकी उनको कर्मघर पनि माइपोखरी, इलाम नै हो । आफ्नो थातथलोलाई सधैं माया गर्ने उनले गीतमार्फत गाउँघरको बयान गर्छिन् । देशको माया र परदेशको बिलौना गीतमार्फत व्यक्त गर्दा मन हल्का हुनु स्वाभाविकै हो ।
माया मीठो मेरो हजुर त्यो मनभित्रको !
जुनी–जुनी–२ मा समेटिएको यो गीतमा सञ्जीवनीको आवाज रहेको छ भने सुरेश अधिकारीले संगीत भरेका छन् । उल्लिखित सुनेपछि भन्न कर लाग्छ– उनीभित्र देशप्रेमका सानो–सानो पिरामिड चुलिएको छ ।
ओछ्यानै पो परिन् कि त दमकी रोगी आमा
बाबा छन् कि विपत्तिमा आङमा छैन घाम
उल्लिखित गीत सुन्ने जोकोहीले नीलम आङबुहाङ राईलाई प्रेमिल गीतका कुशल शब्द–संयोजक भनेर प्रशंसा गर्न पछि पर्दैनन् । गीतका प्रत्येक शब्दमा कौशल प्रदर्शन गर्न सिपालु भएकीले नै उनी श्रोताका मनमा बस्न सफल छिन् ।
नेपालका अधिकांश नयाँ तथा पुराना गायक–गायिकासँग काम गरिसकेकी छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनको गीत भारतीय गायिका सञ्जीवनीले समेत गाएकी छन् । जुन गीत सर्वाधिक चर्चित बन्यो ।
पहिलो गीतिएल्बम सार्वजनिकपछि पछाडि फर्केर हेर्नैपरेन । एउटी प्रवासी नारी स्रष्टाले पाएको त्यो सफलतालाई कम आँक्न मिल्दैन । त्यसपछिका सफलताले व्यापकता पाउँदै गएको छ । जुनी–जुनी गीतिएल्बममा समेटिएका सबै गीतले चर्चा पायो । त्यसमध्ये कुमार सानु र सञ्जीवनीको स्वर र सुरेश अधिकारीको संगीत रहेको ‘पुरानो हुँदैन माया’ शीर्षाकृत गीत गीत–संगीतप्रेमीको दिलदिमागमा ताजै छ ।
गीतका अलावा कविता लेखन र साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनमा उनको उपस्थिति देखिन्छ । ‘इलामे चेलीका रचनाहरू’ (संयुक्त कवितासंग्रह),अन्तरमनका तरंगहरू (गीतसंग्रह), ‘मेची किनार साहित्यिक त्रैमासिक’ (प्रकाशक/व्यवस्थापक), ‘जुनी–जुनी– भाग १ र २’, ‘नीलम’ (गीतिएल्बम) सार्वजनिक भएका छन् । चलचित्र “हसियाँ’का गीतकारसमेत रहेका उनको गीत र कविता लेखनले बिट मार्ने तर्खर देखिँदैन ।
गीतकार नीलम आङबुहाङ राई श्रीमान् लेखराज राई र दुई छोरी लरिन र लेनिस्कासँग बेलायतको अल्डरसटमा बस्दै आएकी छन् ।